Golaha Wasiirada Oo Yeelanaya Kulankoodii Ugu Horreeyey. – Radio Daljir
Golaha Wasiirada Oo Yeelanaya Kulankoodii Ugu Horreeyey.
Maarso 30, 2017 3:33 b 0
Ra’isul wasaaraha DF Soomaaliya ayaa iclaamiyay in kulanka ugu horeeya ee wasiirada cusub ay yeelan doonaan maalinta maanta oo khamiis ah.
Kulankan oo uu ku sheegay mid deg deg ah ayaa waxaa looga hadli doonaa arimaha amaanka iyo abaaraha ka jira Soomaalia sida uu Ra’isul wasaare Kheyre sheegay.
“Kulanka koobaad ee golaha wasiirada waxaa uu udhici doonaa si deg deg ah, waliba waxaan diirada ku saari doonaa amaanka iyo ugar gaarida dadka”ayuu yiri Ra’isul Wasaare kheyre.
Dhanka kale Ra’isul wasaaraha DF Soomaaliya ayaa sheegay in xildhibaanada uu ufuri doono albaabkiisa iyo albaab kasta oo wasiirada ay leeyihiin si loola xisaabtamo xukumadiisa.
Waa Tee Kooxda Ugu Dhaawacyada Badan Horyaalka Ingiriiska.